. Tangres Industiral CO, LTD rakaumbwa muna 2010, iri "Chinese Ceramic City - Foshan Guangdong". Kubvira pakagadzwa, kambani yedu akaomerera basa dzidziso "Kushanda pamwe chete nomwoyo mumwe uye Kukunda nyika wose". Mumiedzo uye nenhamo, inokudziridza munzvimbo yakawanda-pamwero wokumwe wezvokutengeserana kambani.
The kwakaita basa iri kusanganisira sourcing, kutengeserana, mumiririri kuti imupota uye ekisipoti. boka redu uyewo anoshanda akatibvunzisisa pamwe mutakuri saka taigona kubatsira vatengi kuwana zvakanakisisa yomugungwa mitoro. In kutsanya-kuchinja zvedongo nyika, boka hwapedyo nokukurumidza, uye ayo chigadzirwa rokutengesa kuramba kuwedzera mumwe mwedzi, pamwe zvedongo usina kukonekita, Stainless simbi kicheni singi, Stainless simbi muganhu, Nokushambidza dhishi, 3D makapeti Tile, uye zvinogadzirwa zvakadai vachitengesa zvakanaka mukati nokunze nyika uye vachidikanwa rudo uye yakakwirira kurumbidza yedu aikoshesa vatengi.
Chikonzero nei kambani anogona kuita zvakaisvonaka kubudirira zvakadaro mune unopinza makwikwi ndechokuti ayo chigadzirwa unhu zvakaisvonaka uye trendy nekurunzira vatengi, uye ayo akakwana pashure-rokutengesa mabasa kuhwina pamusika, uye zvinogadzirwa zvakanaka pamwe mabasa akanaka hwapedza Tangres vanhasi. chikwata chedu ane nyanzvi ruzivo zvakanaka uye anoshanda kwazvo devotedly uye zvinobudirira. Business vashandi vane unyanzvi yokumwe zvokutengeserana ruzivo uye chigadzirwa ruzivo. Operators vanosangana yekosi, uye vabudirire Chirungu mumatunhu zvaitaurwa masangano akakodzera ehurumende, uye kuwana International Documentation nyanzvi Qualification Certificate nekanzuru masangano akakodzera muhurumende.
Tangres , kuteerera nokukurumidza kumusika kushanduka kutungamirira muitiro! Kuvandudza chichibudisa tigozokwaniswa! Kuedza zvatinogona kugutsa vatengi vedu muzvinhu zvose!